अटेरी, घमण्डी र जिद्दी स्वभावका हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति,तपाईको कमजोरी के ? – Patrika Nepal
पुष ८, २०७८ बिहिबार 26
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रबाट मानिसको भूत, भविष्य र वर्तमानको फलादेश गरिन्छ। उसको जन्म समयलाई आधार मानेर जन्म कुण्डली तयार पारिन्छ। जन्म कुण्डलीमा बसेका ग्रहकोप्रभाव स्वरुप उसमा देखिने भूत, वर्तमान र भविष्यको फलादेश गरिन्छ।
त्यसो त हरेक मानिसका राम्रा र कमजोर पक्षहरु हुन्छन् । कतिपय कुराहरुको विषयमा आफू जानकार नभएर पनि हामी असफलताको बाटोमा गईरहेका हुन सक्छौ।
समयमै आफ्नो कमजोरी बुझेर अगाडी बढ्न सक्ने हो भने सफलता हात मिल्नेमा दुविधा छैन । त्यसैले शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने राशि अनुसार आफ्ना कमी कमजोरी के हुन्छन् जानिराखौंः
मेष राशिका मानिसहरु धेरै चाँडै रिसाउँछन्, जसको कारण मानिसहरुसंग उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रन्छ । परिणाम स्वरूप यसले सफलताको बाटोबाट पछाडि धकेल्छ। त्यसैले मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो रीस नियन्त्रण गर्नुपर्ने शास्त्रले बताउँछ ।
मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू अरुलाई धेरै चाँडै विश्वास गर्दछन् । अरुको विवेकमा काम गर्दा प्राय उनीहरुले नोक्सान भोगिरहेका हुन्छन्।
उनीहरुको हातबाट धेरै राम्रा अवसरहरू समेत गुमिरहेका हुन्छन् । तसर्थ यी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले कार्यसिसिद्धि पाउनेछन् ।
कर्कट राशि भएका मानिसहरु धेरै भावनात्मक हुन्छन् । तिनीहरू प्रायः भावनात्मकतामा लागेर गलत निर्णय लिन्छन् । जसको कारणले कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरुले पछि पछुताउनुबाहेक केही हुँदैन । त्यसैले कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरुले यी विषयमा बेलामै सोच्नुपर्ने हुन्छ।
सिंह राशि भएका मानिसहरु आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि कुनै कुरा बाँकी राख्दैनन् । यहाँसम्म कि उनीहरु धेरै समय खर्च गरेर भए पनि आफ्नो काम फत्ते गर्न चाहान्छन्।
साथै छोटो तरिकाले काम गर्ने कुरामा निर्धक्क तरिकाले खर्च गर्छन् । जसको कारण उनीहरुलाई भविष्यमा पछुतो हुन सक्छ । उसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीनै खर्च गर्ने बानी हो, जुन बानी परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
कन्या राशि भएका मानिसहरु स्वभावैले अहंकारी हुन्छन् । त्यसैले अरूलाई उनीहरु आफूभन्दा साधारण भन्ने ठान्छन्।
तिनीहरूको यस्तै कार्यहरूले यिनीहरुको प्रगतिमा बाधा सिर्जना भइरहेको हुन्छ। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अहंकार र अरूलाई तुच्छ ठान्ने प्रकृतिबाट टाढा बस्नु उपयुक्त हुनेछ।
Prevसावधान! कुखुराको मासुले तपाईंलाई बनाउँदैछ कमजोर
नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएका दुई जनाको रिपोर्ट फेरी यस्तो आयो
जन्ती बोकेको जिप दु’र्घ’टना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृ’त्यु, मृ’तकको पुरा नामावली सहित
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (656)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (480)
३.	कुवेतमा क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु । हार्दिक श्रद्धाञ्जली (94)